Ücretsiz telefon görüşmeleri / Antso an-telefaona maimaimpoana – Diyaloglar | OpenTran
Ücretsiz telefon görüşmeleri / Antso an-telefaona maimaimpoana – Diyaloglar
Çevirmen & Sözlük çevrimiçi Türkçe-madagaskarlı çeviri Ücretsiz telefon görüşmeleri / Antso an-telefaona maimaimpoana – Diyaloglar
Simon: Salama, Jack. Mahafinaritra ny mahita anao. Manao ahoana ianao?
Jack: (ny sakaizany amerikana). Salama aho. Faly aho mahita anao.
Simon: Manana minitra fanampiny roa ve ianao?
Jack: Mazava ho azy fa marina izany.
Simon: Tsy azonao hazavaina amiko ve ny dikan'ireto nomeraon-telefaona «800» ireto?
Jack: Tsotra be izany, Simon.Zava-telefaona maro an'isa izay mifandraika indrindra amin'ny orinasa na ny fanjakan'ny fiseurs «800» isa. Manome serivisy ho an'ny mpanjifa maimaimpoana ireto isa ireto Amin'ny tranga maro hafa, liana ny hanana mpanjifa vaovao ny orinasa. Raha miantso laharana «800» ianao dia handoa ny faktiora ny antokonao.
Simon: hitako. Ankasitrahako ny fanazavanao, Jack. Amin'ny manaraka dia manandrana mampiasa ireo laharana tsy misy tolako aho.
Jack: Aza adino ny miantso: 1-800-nomeraon-telefaona. Mirary anao ho tsara vintana.
Simon: (miantso ny fitantanana ny fiantohana ara-tsosialy)
Tape: Tonga amin'ny sehatry ny fiantohana ara-tsosialy ianao. Be atao ny solontenantsika rehetra. Azafady mba tazomy, ary ny solontena misy manaraka dia hiaraka aminao, faran'izay haingana.
Miller: Robert Miller io. Sao misy azoko anampiana anao?
Simon: Ora iray lasa izay, nangalarina ny poketrako, tao anatin'io ny karatra fiarovana ahy ara-tsosialy. Te-hanafatra karatra vaovao aho.
Miller: Inona ny laharan'ny karanao?
Simon: Ny isa dia ………
Miller: ny anaranao sy ny adiresinao?
Simon: Simon Chernyak.-100 Montgomery Street, Apartment 2-E. Jersey City, New Jersey 07300.
Miller: Azoko atao ve ny manome ny nomeraon-telefaonanao?
Miller: Handefa karatra vaovao aminao izahay. Ho azonao io ao anatin'ny herinandro.
Simon: (miantso an'i AT